Jowhar.com - Somali news Leader - News: Qaar kamid ah jaaliyada reer Jowhar ee Canada oo deeq soo gaarsiiyay isbitaalka Jowhar
December 07 2013 15:19:35
Qaar kamid ah jaaliyada reer Jowhar ee Canada oo deeq soo gaarsiiyay isbitaalka Jowhar
Qaar ka mid ah jaaliyada ka soo jeeda gobolka Sh/dhexe ee dalka Canada ayaa soo gaarsiiyay deeq isugu jirta daawo,bustooyin,maro kaneeco iyo lacag isbitaalka magaalada Jowhar. Marwo Xabiibo Cabdi Kaasiyeeri oo ka wakiil ah ahayd jaaliyadan ayaa waxa ay deeqdan ku wareejisay maamulka isbitaalka Jowhar.
Waxaana ay Xabiibo Cabdi Kaasiyeeri oo ku dhalatay magaalada Jowhar ay ahayd markii ugu horeysay ee ay soo gaarto magaalada Jowhar muddo labaatan sano ah ay mid mid u booqatay qolalka isbitaalka ay bukaanada ku jiraan iyadoo u qeybisay deeq lacag Shillin Soomaali ah. Maamulka isbitaalka Jowhar ayaa ugaga mahadceliyay jaaliyada gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka Canada deeqda ay soo gaarsiiyeen walaalahooda Soomaaliyeed.
Isbitaalka magaalada Jowhar ayaa waxaa maalin walba soo booqda bukaan faro badan, maadaama haatan magaalada Jowhar ay ku hareereysan yihiin biyaha ka soo fatahay wabiga Shabelle.
mahad on November 22 2013
jowhar.com3,108,867 unique visits